Sirdoonka Mareykanka Oo Ka Digaya Suurtagalnimada In Taliban La Wareegto Afghanistan – somalilandtoday.com
(SLT-Washington)-Hay’adaha sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay maamulka madaxweyne Biden in kooxda Taliban ay la wareegi karto inta badan Afghanistan laba illaa saddex sanno gudahood waa haddii ciidammada Mareykanka ay ka baxaan dalkaasi ka hor heshiis awood qeybsi oo dhexmara dhinacyada dagaalamaya.
Haddii ay tani dhacdo, waxa ay u oggolaan doontaa al-Qaacidda inay mar kale saldhigato Afghanistan, wargeyska New York Times oo xiganaya saraakiil Mareykan ah oo aan magacyadooda la sheegin ayaa sidaas wariyay.
Madaxweyne Joe Biden ayaa go’aan ka gaadhaya in 1-da bisha May uu qeybtii ugu dambeysay ee ciidammada Mareykanka oo gaaraya 3,500 ka soo saaro Afghanistan, taasi oo qeyb ka aheyd heshiiskii Febraayo 2020 uu maamulkii Donald Trump la galay kooxda Taliban.
Wargeyska New York Times ayaa ku warramaya in qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ee doorbidaya in ciidammada Mareykanku ay sii joogaan Afghanistan ay adeegsanayaan warbixinta sirdoonka si ay ugu doodaan in ciidammadu ay dalkaasi sii joogaan ka dib waqtiga loo qabtay bixistooda ee 1-da May.
Aqalka Cad ayaa diiday in uu ka hadlo warbixintan sirdoon oo la diyaariyay sannadkii hore.
Biden ayaa khamiistii ka sheegay shirkiisii jaraa’id ee ugu horreeyay ee uu ku qabtay Aqalka Cad in ay adkaan doonto in la raaco waqtiga soo saarista loo qabtay, oo sidoo kale u baahan in lagu saaro ilaa 7,000 oo askari oo ka socda ciidammada isbahaysiga.
Laakin waxa kale oo uu sheegay “in aanu sawiran karin” in ciidamada Mareykanku ay dalkaasi sii joogaan sannadka danbe.
Taliban ayaa Jimcihii sheegtay in ay dib u bilaabi doonto dagaallada ka dhanka ah ciidamada shisheeye haddii ay ciidamadu sii joogaan ka dib waqtiga loo qabtay in dalkaasi looga saaro.